I-LS Vision IP Camera Solution Study
I-Shenzhen, China - LS Vision, umenzi ohamba phambili emhlabeni kanye nomhlinzeki wemikhiqizo yokubhekwa kwevidiyo, unikeze ukubhekwa kwevidiyo okusebenzayo ...
I-Shenzhen, China - I-LS Vision, umenzi oholayo emhlabeni wonke kanye nomhlinzeki wevidiyo wokubhekwa kwevidiyo, unikeze uhlelo lokuqapha lwevidiyo olusebenzayo lokuvikela idolobha laseKorea, e-Australia, uMongolia kanye neBrazil, ukufeza izidingo ezijwayelekile zokuphepha zokuphepha.
Ukubhekwa kwesifunda kwe-Korea:2MP PTZ& Ikhamera ephezulu ye-5MP ephezulu ye-HD IP ifakiwe
Isikhumulo sezindiza sase-AustthAlia:I-2MP / 3MP ye-Lens Vandal Viof Doof nekhamera ye-PTZ efakiwe.
Isiteshi Sesitimela saseMongolia: No.1 IP Camera yemvelo enzima -40Degreet kuya ku-75Degree.
Isixazululo esisha kakhulu, esithembekile se-IP sasihlelwa ngochwepheshe be-LS Vision's ukuqinisekisa ukuphepha kwedolobha. Ikhamera yenethiwekhi ye-LS Vision ifaka inzwa ye-CMOS ye-CMOS ye-MEGAPIXEL ethuthukayo ye-CMOS, enikeza izithombe ezisezingeni eliphakeme ku-AT25 / 30fps @ 1080p. Iyasekela&Ikhodi ye-MJPEG embaxambili nokutholwa okuhle. Nge-30 Meter IR Range, ikhamera yenza kahle kuzo zonke izimo zokukhanyisa, imini nobusuku.
Amakhamera we-ITC Series ane-algorithm esebenza kahle kakhulu anikeza ukubhekwa okuhlakaniphile kwemigwaqo, emigwaqweni, izindawo zokubheka izimo zomgwaqo. Ngomsebenzi wayo wokuxazulula izithombe ze-HD kanye ne-shutter esheshayo ku-1/25 ~ 1 1/100000, la madivaysi angabamba izithombe ezicacile ze-Ultra ezimoto futhi zibone amapuleti elayisense, noma ngabe zishayela ngejubane elikhulu kakhulu. Lawa madivayisi ahlakaniphile ahlanganisa ukuqashelwa kwezinhlamvu ze-Optical
I-LS Vision Series NVRS enomthamo wesiteshi esifinyelela kwabangu-128. Le modeli inamamojula wokuhambisa amandla angafuneki futhi futhi isekela amakhamera wenethiwekhi yomkhiqizo amaningi, kufaka phakathi i-Dahua, e-Axis Vision, i-Axis, i-Brickcom, i-Dynacowell, i-honewell, panasonic, njll.
"Ngekhwalithi yami yombono wami muhle kakhulu - kungenzeka ukuthi ukhethe izinhlobo ezimbalwa zezinqumo, kufaka phakathi i-HD. Zonke izinketho ezishiwo zilungiselelwe ngqo kuzo zonke ikhamera - Uma kunamakhamera amaningi Kulula ukusebenzisa uhlelo lwe-IPVMS, "kusho u-Alexander ePoland.
"Njengamanje ngivivinya amakhamera, ngihlabeke umxhwele ngabo." U-Ali uthi, uvela eMiddle East.
PHAMBI I-LS Vision High-Speed ​​Dome WiFi Ptz Network Inethiwekhi Ukuhlolwa Kwenethiwekhi
Ukubona okungaphezu kokusebenzisa amakhamera we--- panoramic uchungechunge OLANDELAYO